Mဆိုင်းလုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…. – Shwe Naung
N N | May 16, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ် Mဆိုင်းလု က တော့ အများ နဲ့ မတူတဲ့ ပင်ကိုယ်ဟန် ကြောင့် ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့ အားပေး အချစ်ပို မှု ကို တစ်ခဲနက် ရရှိထား တဲ့ သူတစ် ယောက် ပါ။
အနု ပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကြာ ကြိုးစား လုပ်ကိုင် ခဲ့တဲ့ Mဆိုင်းလု တစ်ယောက် ယခုလက်ရှိ မှာ လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားတွေ နဲ့ အတူ Photo shooting တွေ ကို လက်ခံ ရိုက်ကူး နေရ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
Mဆိုင်းလု က ရိုးသား ပွင့်လင်း တဲ့ မနော​မြေ က ကချင် တိုင်းရင်း သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် ချစ်စရာ မျက်နှာ လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး မြင်သူတိုင်း က အချစ်ပို ပြီး အားပေး ကြတာ ပါ။
ဆိုင်းလု ရဲ့ ရုပ်ရည်လေး က ပြစ်ချက် မရှိ လှရက် လွန်းပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ ကောက်ကြောင်း အလှ ကလည်း ရင်သပ် ရှုမောဖွယ် ကောင်းတာ ကြောင့် ဘယ်လို ဖက်ရှင် တွေပဲ ဝတ်ဝတ် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်း တာ ကလည်း အားသာချက် တစ်ခု ပါ နော်။
ယနေ့ မှာလည်း ဆိုင်းလု က နိုင်ငံခြားသူ လေးလို ပြင်ဆင်ပြီး အမိုက်စား ဖက်ရှင် နဲ့ ကပြ ထား တဲ့ TIKTOK ဗီဒီယို တစ်ခု ကို တင်ပေးလာခဲ့ ပါ တယ်။
ကိုယ်လုံးလေး ကို လှုပ်ရမ်း ကာ အလန်းစား ကပြ ထားတဲ့ ဆိုင်းလု ရဲ့ ဗီဒီယို လေး က ကြည့်မိ သူတိုင်း ကို အကြိုက် တွေ့ မိစေမှာ ဖြစ် လို့ ချစ်ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့်ရှု စေဖို့ အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက် ပေး လိုက်ပါ တယ် နော်။
အဆို ပါ TIKTOK ဗီဒီယို လေး ကို ကြည့် ပြီး ပရိသတ် တွေ က အသည်းလေး တွေ ပေးခဲ့ ဖို့ မမေ့ လိုက် ပါနဲ့ နော်။
ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…..
နွယ်ဒါ‌လီထွန်းရဲ့ အိမ်ယာထက်က အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
အဖြူရောင်လေးနဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ လှပနေတဲ့ သဇင်ဦး….
အသားကပ် ၀တ်စုံလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ……